MVRK: Mwepụta nke 3D Virtual Omume | Martech Zone
N’izu gara aga, a kpọrọ m òkù maka njem mbụ m na - eme online mebere ogbako oghere. N'ikwu eziokwu, oge nke mkpọchi mkpọchi na-egwu egwu ma echere m na ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngwaọrụ, enwere m nchegbu na ọ nwere ike ịdị ntakịrị geeky ma ghara ịdọta ụlọ ọrụ azụmahịa. Echere m na ọ nwere ike ịdị ka igwu egwuregwu vidio karịa ịnọ n'ezie na gburugburu azụmahịa azụmaahịa.
Agbanyeghị, njegharị nke onye ọrụ kpọrọ m òkù masịrị m ma nwee nchekwube banyere ahụmịhe:
Nchọgharị Onwe - Enwere m ike ịgagharị na mbara igwe, lelee vidiyo ma ọ bụ ihe ngosi, ma soro ndị mmadụ n'onwe m.
1: 1 Mkparịta ụka - Enwere m ike ibido ma soro ndị mmadụ na-ekwurịta okwu n'ime ụlọ ime ụlọ ebe mkparịta ụka na ngosipụta na-eme n'etiti anyị na ọ dịghị onye ọzọ.
Ahụmahụ Na-emetụta - Ahụmịhe ahụ n'ozuzu adịghị ka egwuregwu vidiyo ma ọlị, ọ bụ ihe na-enweghị isi na enyi na enyi. Enwere m ike ịhụ onye na-ejighị nkà na ụzụ na-anụ ụtọ ya.
Mkpọchi Post - Enwere m ike ịhụ n'okporo ụzọ ebe ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe mmemme na ihe omume mebere n'otu oge na teknụzụ a.
Otu ọkpụkpọ n'ahịa a bụ MVRK, ndị na-eweta Vx360 n'ahịa. Ikpo okwu na -emepụta gburugburu ebe-ewu ewu nke na-agbanwe web n'ime ndu Ahụmahụ ndị mebere nke ahụ gbasakwara iru na nchịkọta akụkọ dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
N'iji Vx360, MVRK na-etolite gburugburu ebe obibi zuru oke nke na-eme ka ahụmịhe dijitalụ na-eche dị ka ọnọdụ ụwa n'ezie site na eserese dị elu na textures na nyocha ogo 360 na Walkability ihe omume yiri ndụ. Ndị ọbịa na ndị bịaranụ na-agagharị na gburugburu ebe obibi site na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, na-ahụ ụlọ dị iche iche, mmekọrịta, na ndị ọzọ.
Ihe ngosiputa VV360 nke MVRK juputara na igwakpo ndi mmadu na ohere ndi ozo site na oba akwukwo nke ihe ndi puru ime ka ha buru uzo ha choro.
Agbakwunyere mmekọrịta Video-On-Demand (VOD) ọdịnaya
Live stream ike
Njikọ nkwukọrịta ụzọ abụọ
Gbasaa nyocha nyocha
WebXR na ngwa ndị ọzọ agwakọtara
Ohere maka otu ụdị na ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ike isi tinye ọhụụ ọhụụ ọhụrụ a enweghị njedebe. Gbatịfe karịa nzukọ ndị ọzọ na ụdị akara na IP, dị ka:
Were ntụrụndụ gaa n'ọkwa ọzọ - Branddị ndị ọrụ dị ka ọrụ ntanetị, ihe nkiri na mbipụta akwụkwọ nwere ike ibuli ka ndị mmadụ si enweta ihe odide na akara nkata site na ịdọrọ ndị Fans n'ime ụwa ha kachasị amasị ha ma kwe ka ha gaa leta oge ọ bụla ha chọrọ, mgbe ọ masịrị ha. Ọrụ maka oge ọhụrụ ma ọ bụ ọdịnaya agbatịwo na mpụga ọdịnala ọdịnala ọdịnala iji kwe ọ bụla ofufe itinye aka.
Nye ngwaahịa ulo oru na-enwetụbeghị ụdị iru - Adtinye ihe ntanetị dị na ntanetị na ngwaahịa ọhụụ pụtara ugbu a karịa websaịtị agbakwunye. Ihe okike maka mmeghe amaghi oke ya na gburugburu Vx360 meputara ma ndi oru nweta ihe omuma di elu iji soro onyinye a.
Gbanwee ihe omume na nzukọ mmadụ - Site na mmachi ohuru nke ntinye aka nke mmadu, ụdị nwere ike ịnyefe ụlọ ntu, ngosi ma ọ bụ ahụmịhe omume na ụwa dijitalụ ebe ndị bịara ya nwere ike ịgagharị gburugburu ohere sara mbara nke echefuru echefu na mmekọrịta mmekọrịta dị elu site na ndị nkwado dị iche iche na ndị mmekọ ụdị. A pụkwara ijikọ ikpo okwu na ihe omume dị n'ime mmadụ iji mee ka iru ụwa zuru ụwa ọnụ.
Nke a bụ ọgbọ na-abịa nke nwere ahụmahụ ika bara uru; a ọhụrụ ọkọlọtọ na-enweghị ókè. Teknụzụ bụ ọganihu anyị nwere n'ọrụ tupu ụwa atụghị anya ya ma chọọ mgbanwe na ahụmịhe dijitalụ na mebere. Ọ dị mkpa ugbu a, anyị kwenyere na ọ bụ mgbanwe maka etu ụdị si eme nke ọma ma na-emekọrịta n'ihi na ọ na-enye ha ohere ịnyekwuo ha - imepụta ihe karịa, ihe ọhụrụ, ahụmịhe ndị ọzọ. Ọ na - emepụta ọtụtụ ihe dị ike iji weta ndị nwere ike ịnwe ike ịbanye na ika ahụ na mmemme ọhụụ, nzukọ, mmegharị na ngosi.
Steve Alexander, onye nchoputa na Chief Chief Officer nke MVRK
Nwere mmasị ịhụ ihe ọhụụ Vx360 dị?
Tags: omumeNwachukwumebere omumeOgbogu 360